အိမ်ထောင်ရေး status ကို VKontakte ဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
VKontakte ၏အသုံးပြုသူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး status ကိုဖုံးကွယ်ထားရန်ဆန္ဒရှိပေမယ့်ဒါဟာလုပ်ပုံကိုအဘယ်သူမျှမသဲလွန်စရှိသည်။ ဒီနေ့ကအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ VKontakte ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်အိမ်ထောင်ရေး status ကိုဖုံးကွယ်, သင်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဖော်ပြသည်။ အိမ်ထောင်ရေး status ကို - ထိုအချက်များကိုတစ်ခုမှာ။ ရဲ့သင်ကသတ်မှတ်ထားသောကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ခဏအကြာတွင်သူမျက်စိ prying ထံမှဖုံးကွယ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။
Subscriber များအား VKontakte ဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Subscriber များအားစာရင်းတစ်ခုမှလူများ၏ထို့အပြင်ကြောင့်လူမှုကွန်ယက် VKontakte ၏အသုံးပြုသူတစ်ဦးကလုံလောက်ကြီးမားသောအရေအတွက်, စာရင်းကိုပုန်းအောင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. အံ့ဘွယ်သောအမှု။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သာအနည်းငယ်အကြံပြုချက်များရှိပါသည်။ ကျနော်တို့လူမှုရေး site ကိုအတွင်း subscriber များအား VC ကိုလောလောဆယ်ပုန်းရှောင်။ VK လက်ရှိကွန်ယက်ကို subscribe လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆက်စပ်နှစ်ခုဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။
မြို့ရိုးအ VKontakte ရှင်းလင်း
အဆိုပါ VKontakte ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်မြို့ရိုးမှ entries တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, သို့သော်လူမှုရေးကွန်ရက်၏စီမံခန့်ခွဲရေးအဆိုပါသန့်စင်ရိုးအထူးပြုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေး၏စောင့်ရှောက်မှုယူသည်မဟုတ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူများ Third-party စွမ်းရည်နှုနျးမှရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကကြိမ်အတွက် VK site ပေါ်တွင်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။
အုပ်စု VKontakte မြှင့်တင်ရန်လုပ်နည်း
ယနေ့လူမှုကွန်ယက် VKontakte အများအပြားအသုံးပြုသူများသည်တက်ကြွစွာအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မရှိ, ဝင်ငွေရရှိမှုအဘို့။ ဤသည် VK အုပ်ချုပ်ရေးအတူတကွအသွားအလာမြင့်မားနှင့်အတူနေ့စဉ်အလွန်ကြီးမားခု၏ generate နိုင်သည့်ကြော်ငြာများအတွက်အခွင့်အလမ်းများများစွာပေးပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte ၏အသုံးပြုသူတစ်ဦးအထင်ကြီးအရေအတွက်ကမကြာခဏတစ်ဦးတည်းသာရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဤသယံဇာတသွားရောက်ကြည့်ရှု - သီချင်းနားထောင်ပါတယ်။ သို့သော်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်အင်တာနက် browser နှင့်စံကစားသမား၏အဆင်မပြေများအတွက်တောင်းဆိုချက်တွေကြောင့်, သင် VK တစ်ဦးအလည်အပတ်မရှိဘဲအသံသွင်းဖို့နားထောင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို VKontakte အုပ်စုအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖန်တီးရန်
အဆိုပါ VK Group မှခုနှစ်တွင်အယ်လ်ဘမ်အတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အားမည်သည့်အရည်အသွေးမြင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါဓါတ်ပုံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အကျဉ်းချုပ် form မှာမဆိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုပေးအကြာတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အတူကဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မကြာခဏအများပြည်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုအချို့အတွက်ကြောင့်ခြုံငုံဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ, ဓါတ်ပုံများ, ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုသာ sort ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
တစ်ဦး functional ဖြစ်စေလူမှုကွန်ယက် VKontakte ၏စစ်ဆင်ရေး၏ကျရှုံးခြင်းတွေနဲ့အသုံးပြုသူပြဿနာများ - ပုံမှန်ပင်တစ်တည်ငြိမ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းဒီ site ပေါ်တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းတခြားဆိုဒ်များတွင်သာဖြစ်ပေါ်သည်။ အချိန်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှမအောင်မြင်မှုများ၏ဖွဲ့စည်းမှုအွန်လိုင်းနားထောင်ခြင်း inoperable built-in ဂီတစနစ်ကလာပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အတွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နံရံများပိ - လူအတော်များများအသုံးပြုသူများအတွက်ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမသက်ဆိုင်သင်ဤလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်း၏, အမြဲအတူတူပင်လမ်းဖွင့်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များအကြံပြုချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်တို့ကိုလုံးဝအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်း၏မြို့ရိုးပေါ်မှာမဆိုမှတ်တမ်းများဖုံးကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဂိမ်း VKontakte load မပါဘူး
လူမှုကွန်ယက် VKontakte အတော်များများဟာအတော်လေးတက်ကြွအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးလျှောက်လွှာများဒေါင်းလုတ်ဆွဲနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာများရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အဖြစ်သငျသညျဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုပုံမှန်နိုငျပုံကိုအပေါ်အချို့သောအကြံပေးချက်များပေးပါ။
Copy ကူးခြင်းနှင့်အပြုံးပုံ paste VKontakte
က VKontakte စာသားအကြောင်းအရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလူမှုကွန်ယက်အတွက်အလွန်အပြုံးမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသင်ကူးယူခြင်းနှင့် paste နိုင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အပေါငျးတို့သတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအကြောင်းကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ Copy ကူးခြင်းနှင့်ကြီးမားသောမှတ်တမ်းများရွေ့လျားလာသောအခါအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအရာ, အသီးအသီးအသုံးပြုသူမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အီမိုဂျီ copy နဲ့ paste နိုငျသညျ, ဆိုက်တွင်ရုပ်ပြောင် VK VK paste ။
VKontakte ခေါင်းဆောင်များ Hide
အတော်လေးမကြာခဏဆိုအများပြည်သူဆာဗာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနေသောလူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အသုံးပြုသူများသည်အတွက်, သူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောခေါင်းဆောင်များဖုံးကွယ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ဒါဟာကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြပါမည်, ဒီလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပါ။ VKontakte ယနေ့များ၏ခေါင်းဆောင်များဖုံးကွယ်ခြင်း, အလုပ်လုပ်တဲ့ VC ကိုအပေါငျးတို့သမကြာသေးမီ updates များကိုပေးရပ်ရွာများ၏ခေါင်းဆောင်များဖျောက်ရန်နှစ်ခုသာအဆင်ပြေနည်းလမ်းရှိပါတယ်။
မိမိကိုမိမိ VKontakte ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူလူမှုကွန်ယက်၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေသည်။ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ VKontakte ၏အခြားအသုံးပြုသူများပုဂ္ဂိုလ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျများရေးသားခြင်းများအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေအင်္ဂါရပ်ကိုပေးအပ်သည်။ အခြားသူများကိုပင်ထိုသို့သောအမှုကိုအဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုမိနေကြသည်မဟုတ်စဉ်အချို့သုံးစွဲသူများကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းအပြည့်အဝသုံးစွဲခြင်းရှိနေစဉ်။
တည်နေရာ "Bookmarks" VKontakte
အဆိုပါ "Bookmarks" သင်ဆိုက်အတွင်းအချို့သောလုပ်ရပ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်အချက်အလက်များ၏ဥစ္စာဓနကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြု, လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Next ကိုကျနော်တို့တရားဝင်မိုဘိုင်း application ကိုမှတဆင့်ဖွင့်ဖို့နဲ့တစ်ဦးကို PC ပေါ်တွင်ဆိုပါတယ်အပိုင်းကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ Viewed ကို "Bookmarks" အပိုင်း VC ကိုအများအပြား themes များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါဖို့အကူးအပြောင်း, ဥပမာ, delete သို့မဟုတ်အမြင်အကြိုက်။
VKontakte အမှား«ရေလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ရေး» Remove
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte တချို့ features တွေ၏တက်ကြွအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ, သငျသညျအခြို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ပေါ်ထွက်လာသော, အမှား "ရေလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ရေး" ကြုံတွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့အဓိက၏အကြောင်းရင်းနှင့်ဒီပြဿနာမှဖြေရှင်းချက်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ မှားယွင်းနေသည် "ရေလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ရေး" VC ကိုပထမဦးစွာရဲ့အထက်ပါအမှားတစ်ခုတည်းကိုသာအလိုအလျောက် VC ကို site ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်ကြောင်းရှင်းလင်းကြကုန်အံ့။
ကို Safe Search ကို VKontakte ပိတ်ခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့်, VKontakte SafeSearch ကို enabled ဒါကြောင့်တချို့ဗီဒီယိုများရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အလွယ်တကူယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောပါလိမ့်မယ်အရာ, ပိတ်နိုင်ပါသည်။ SafeSearch ကို VKontakte ယခုငါတို့ဒီ function ကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည်ကိုပိတ်ထားပါ။ Method ကို 1: အောက်ပါအတိုင်းပယ်ဆိုက်ဘေးကင်းလုံခြုံရှာဖွေရေး၏ဘရောက်ဇာကိုဗားရှင်းရဲ့ Desktop ကိုဗားရှင်းမှာတော့: က "ဗီဒီယို" tab ကိုဖွင့်ပါ။
VKontakte အိမ်ထောင်ရေး status ကို Installing, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး SP အဖြစ်အတိုကောက် - လူမှုကွန်ယက်၏အသုံးပြုသူအများစုမှာများအတွက်စံအလေ့အကျင့်။ သို့သော်နေဆဲပါသေးသငျသညျသူ၏ page ပေါ်တွင်အိမ်ထောင်ရေး status ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသိမထားတဲ့အင်တာနက်ပေါ်ရှိလူများ, ရှိပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးကိုတိုက်ရိုက်ဖက်စပ်တည်ထောင်ရန်နှင့်ဆိ၏နည်းလမ်းများလူမှုရေးအပြင်အသုံးပြုသူအိမ်ထောင်ရေး status ကိုထူထောင် - ဒီဆောင်းပါးမှာပါကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုလိမ်ယှက်သည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်မထိပါလိမ့်မယ်။
မှတ်စု VKontakte Creating နှင့်ဖျက်ခြင်း
အချို့သောကဏ္ဍများကိုပြောင်းရွေ့သို့မဟုတ်လုံးဝဖယ်ရှားခဲ့ကြပေမည်ဒါကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte, များစွာသောအလားတူအရင်းအမြစ်များကိုကဲ့သို့, နောက်ဆုံးသတင်းများ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုခံစားခဲ့ရသညျ။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ကဏ္ဍများ, ရှာတွေ့ဖန်တီးခြင်းနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းကိုဖော်ပြရန်ရာဖျက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုဖြစ်ကြသည်။
VKontakte နှင့်အတူ SIFCO ကို download လုပ်လုပ်နည်း
နေ့စွဲရန်, လူမှုကွန်ယက် VKontakte အလုံအလောက်သင်မကြာခဏသာဆိုက်အတွင်းအသုံးမပြုနိုင်သည့်ကာတွန်းပုံများ, ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်။ မည်သည့် gif ပုံရိပ်ကိုမသက်ဆိုင်ယင်း၏တည်နေရာထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည် Download SIFCO VKontakte ကို download လုပ်လုပ်နည်း, သင့်လျော်တဲ့နိမိတ် "GIF ကိုက" ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံများ VKontakte ဖျက်ပစ်ပါ
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အတွက်ဓါတ်ပုံကိုဖျက်ခြင်း - အတော်လေးသေချာတစ်ခုချင်းစီကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူကိုဖြတ်ပြီးလာသောခါတိုင်းလိုအဖြစ်စီးပွားရေး, ။ တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်စဉ်သို့သော်ဤရှိနေသော်လည်းလူအတော်များများနေဆဲ, တစ်ချိန်က upload လုပ်ထားတဲ့ပုံဖျက်ခြင်းသာအခြေခံနည်းလမ်းများကိုကိုငါသိ၏။ image ကိုမဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်စဉ်လူမှုတင်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးအရာများ၏အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။
အားလုံးအစည်းအဝေးများ VKontakte ပြီးစီး
ဆက်ဆက်, လူမှုကွန်ယက် VKontakte အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများက (ဥပမာ, ဖုန်း၏ဆုံးရှုံးမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အထိခိုက်မခံဒေတာနှင့်အတူစသည်တို့ကိုစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ရန်) တစ်ချိန်ကမှာအပေါငျးတို့သအစည်းအဝေးများပြီးမြောက်ရန်အလွန်လိုအပ်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးထိုသို့သောအခွင့်အလမ်းပေးခဲ့ပါသည်။